I-Lake District Luxury eseceleni enesidlo sasekuseni - I-Airbnb
I-Lake District Luxury eseceleni enesidlo sasekuseni
Gilgarran, England, i-United Kingdom
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Sheena
U-Sheena Ungumbungazi ovelele
Sawubona futhi siyakwamukela ekhaya lethu elihle lase-Lake District!
Ehlelwe onqenqemeni lwe-Western Lake District, sinendlwana enhle efihlekile eqhele ngemizuzu engu-15 ukusuka kokubili e-Loweswater nase-Cockermouth Market Town. Sizungezwe indawo enhle, inqwaba yohambo oluyingqophamlando futhi manje sinikeza uhambo oluqondiswayo kanye nohambo lokuqwala amadwala ngaphandle ezivakashini zethu (kuqinisekiswe ngokugcwele futhi kuvikelwe).
Sicela uqaphele, sinamakati amathathu noma kunjalo agcinwa ezindaweni ezizimele zendlu.
U-Mreon nomlingani wami, u-Julian, bangabanikazi bendlu, futhi singanikeza imininingwane eningiliziwe mayelana nendawo yendawo kuhlanganise nanoma yimiphi imizila yokuhamba nezindawo ezithandwayo endaweni. Sizokunikeza isidlo sasekuseni esidliwayo futhi sixhumane nawe uma ufisa. Uzoba nekamelo lokulala elinokhiye, ikamelo lokuphumula elihlanganyelwa nesinye isivakashi esiphezulu se-bnb somoya kanye nokupaka okungaphandle komgwaqo. Siphinde sibe negalaji eliphephile lamabhayisikili njll.
Sisemzaneni othulile, onezindlu ezingaba ngu-100, ezizungezwe ubuhle bemvelo obuhlaba umxhwele. Ilungele ubusuku obufihlekile noma obubili, noma impelasonto esebenzayo ezintabeni.
Sizotholakala phakathi nokuhlala kwakho, futhi uzoba nenombolo yethu yeselula uma udinga noma yiluphi usizo noma usizo. Siphinde sihlinzeke ngezinyawo eziqondiswayo nokuqwala amadwala angaphandle, ngakho-ke sibuze uma unesithakazelo!!
USheena Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Gilgarran namaphethelo